Smart Sharing Global Limited က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Choi Report: Go Jin: စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ၉.၇၂၄ ဒသမ ၅၂.၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာ – Pandaily
Smart Sharing Global Limited က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Choi Report: Go Jin: စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ၉.၇၂၄ ဒသမ ၅၂.၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာ
Aug 24, 2021, 18:11ညနေ 2021/08/24 20:07:04 Pandaily
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အကွီးမားဆုံးမိုဘိုငျးဖုနျးအားသှငျးကိရိယာတဈခုဖွဈတဲ့ SmartShare Global Limited (“Energy Monko”) ဟာ ဒုတိယသုံးလပတျမှာ စာရငျးစဈမပါဘဲ ဘဏ်ဍာရေးအစီရငျခံစာကို ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇှနျလ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒီသုံးလပတ်မှာ အသားတင်အမြတ်ငွေ စုစုပေါင်း သန်း ၁၃၀ လောက်ရှိပြီး၊ အသားတင်အမြတ်ငွေ သန်း ၂၇၀လောက် ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကုမဏီဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ငါးနှဈ ဆကျတိုကျ ရပျကှကျတိုငျးမှာ သုံးလတဈကွိမျ အမွတျအစှနျးရခဲ့ပါတယျ။
အစီရင်ခံစာအရ စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၁,၅၀၆ ခုခန့် ဝင်ငွေရှိပြီး ၅၂,၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသုံးခု၏ အဓိက လုပ်ငန်းများမှာ—Power Bank Sharing, Power Bank Sale and Advertising Services-တို့ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီငွေမှာ ၁၄၄၃ ဒသမ ၄၉၀ သန်းဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်ကာလတူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၄ ဒသမ ၅၁.၆ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၈၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၁၁.၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
တဆကျတညျးမှာပငျ လုပျငနျးခြဲ့ထှငျမှုနှငျ့ ဝငျငှတေိုးတကျမှု၊ စှမျးအငျထူးထူးဆနျးဆနျး ရရှိမှုမြားက ၅ လပတျ ဆကျတိုကျ အမွတျအစှနျးမြား ရရှိနသေညျ။
Topics: မွငျကှငျးတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းကိရိယာ Provider Energy Monster က “EM” ကို Nasdaq တွင် စာရင်းသွင်း
အစီရင်ခံစာအရ ယခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက် အထိ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွင် အားသွင်းကိရိယာ စုစုပေါင်း ၇၇.၁ သန်းရှိပြီး စိတ်ဝင်စားသည့် Point of China (POI) အွန်လိုင်းမှ ရှယ်ယာများကို ဝမ်ပေါင် ၆ သန်း ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယသုံးလပတျအတှငျး Energy Monster ထညျ့သှငျးထားတဲ့ မှတျပုံတငျအသုံးပွုသူ ၁၉.၄ သနျးဟာ ရာသီအလိုကျ စံခြိနျသဈတငျမွငျ့ တကျခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယသုံးလပတျအတှငျး Energy Monster အသုံးပွုသူဦးရေ စုစုပေါငျး ၂၅၅၁ သနျးအထိရှိလာပါတယျ။
Smart Share Global Limited ၏ CEO Chua Gwang က “ကမြတို့ ဝမျးမွောကျဝမျးသာနဲ့ Energy Monster ရဲ့ ဒုတိယသုံးလပတျမှာ ထူးခြှနျထကျမွကျစှာ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။ ကပ်ရောဂါဒဏ်ခံရပေမယ့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေက မျှော်လင့်ထားတာထက် ကျော်လွန်နေဆဲပါ။ Quality POI ကို ခိုငျခံ့အောငျ လုပျခွငျးအားဖွငျ့ ကနြျောတို့ လုပျငနျးရဲ့ ဦးဆောငျမှုကို ခိုငျမာအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ Third Party Research Agency ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဈေးကွက်ဝေစု ၃၅.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြှင့်တင်ခဲ့တယ်” လို့ China Mobile Device Charging Service က ဆိုပါတယ်။
Zhizu သညျ Round B ရနျပုံငှ ဒေျေါလာ ၁၇. ၂ သနျး ရရှိ ခဲ့သညျ
ဗုဒ်ဓဟူး နတှေ့ငျ လြှပျစဈ ဘီး နှဈ ဘီး စမတျ စှမျးအငျ လဲလှယျ ရေး ကုမ်ပဏီ Zhizu Power Exchange သညျ ယှမျသနျး ၁၁၀ (ဒျေါလာ ၁၇. ၂ သနျး) တနျဖိုးရှိ B ဘီး ငှကွေေးထောကျပံ့ မှုကို ပွီးစီး ကွောငျးကွငွောခဲ့သညျ။
တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းကိရိယာ Provider Energy Monster က “EM” ကို Nasdaq တွင် စာရင်းသွင်းမည်
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အကွီးဆုံး မိုဘိုငျးဖုနျးအားသှငျးကိရိယာ Provider Energy Monster ဟာ ကွာသပတေးနကေ့ တရားဝငျစာရငျးဝငျ Nasdaq မှာ စာရငျးသှငျးထားတဲ့ “EM” ကုတျကို ပထမဆုံး တရုတျပစ်စညျးအဖွဈ လူသိရှငျကွား အရောငျးအဝယျလုပျရာမှာ ပါဝငျလာတဲ့ charging brand ဖွဈပါတယျ။